पाथिभरा माताले सबैको कल्याण गरुन ! हेर्नुहोस भाद्र २६ गते शुक्रबारको राशिफल।सेयर गर्न नभुल्नुहोला – Halkhabar kura
२५ भाद्र २०७७, बिहीबार २१:०५
पाथिभरा माताले सबैको कल्याण गरुन ! हेर्नुहोस भाद्र २६ गते शुक्रबारको राशिफल।सेयर गर्न नभुल्नुहोला
छो’टो तथा रमाईलो यात्रा हुने भए पनि गन्तब्यमा पु’ग्नु अ’गावै बिभिन्न स’मस्याहरुको सामना गर्नु पर्नेछ । आफन्त तथा दाजुभाई सँग म’नमुटाव सिर्जना हुनेछ भने सहयोग तथा समर्थन न’पाउँदा कामहरु समयमा न’हुँदा आर्थिक रुपमा क’मजोर भईनेछ । न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा नहुँने हुँदा कुनै पनि वि’वादित विषयमा सहभागि नहुँनु होला ।
बो’लेर गर्ने कुनै पनि पेशा तथा व्यावसायमा लगानि गर्दा म’नग्गे आम्दानि हुनेछ । गित संगित तथा मिडिया जस्ता क्षेत्रबाट मनग्गे लाभ लिन सकिनेछ । पढाई लेखाईमा भनेजस्तो नतिजाको आउने हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ । साथिभाई तथा आफन्तका साथ रमाईलो ज’मघट हुने तथा स्वादिष्ट भोजनका साथ दिन बिताउन सकिनेछ । अ’ग्रजहरुबाट सुनिने शुभ समाचारले मन उ’त्साहित बनाउनेछ ।
आफन्त तथा घर परिवारका माानिसबाट सहयोग तथा समय अ’नुकुल सल्लाह पाईने हुँदा काम गर्न सहज हुनेछ । प्रणय सम्बन्धको बिकास हुनेछ भने साथिभाई सँगको सम्बन्धमा आ’त्मियता बढ्नेछ । पढाई ले’खाईलाई समय अनुकुल अगाडि बढाई नतिजा हात प्रार्न सकिनेछ । बिभिन्न मानव निर्मित स्रोत साधनको उपयोग मार्फत आर्थिक स्थिति सुदृड बनाउँन सकिनेछ ।
स्वास्थ्य सम्बन्धि सामान्य स’मस्याले सताउनेछ भने शरिरमा आ’लस्यता तथा अ’ल्छिपना ब’ढेर जानेछ । शैद्धान्तिक बिषयमा आफन्त तथा अग्रज ब्याक्तित्वहरु सँग बि’वाद सिर्जना हुनेछ भने मान सम्मान तथा प्रतिष्ठामा कमिको महशुस हुनेछ । तरपनि यात्राको तय हुनेछ । बैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यापार व्यावसायबाट प्रसस्त आम्दानि हुनेछ भने स्वदेशि उत्पादनमा नाँफा कमाउँन अलि बढि समय ‘खर्चनु पर्नेछ ।
समय दिए अनुहार प्र’तिफल ढिला प्राप्त हुनेछ । प्राकृतिक स्रोत तथा सरकारी साधनको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला अ’नाउबस्यक झ’न्झटमा फस्ने ग्रहयोग रहेकोछ । अध्ययनमा बा’धा पुग्नेछ भने अरुका लागी समय खर्चिनु पर्नेछ । साना तिना स्वास्थ्य सम्बन्धि स’मस्याले सताउने हुदा दैनिक कामहरु प्र’भावित हुन सक्छन् ध्यान दिनुहोला । प्रणय सम्बन्धमा म’नमुटाब सिर्जना हुनेछ ।
राजनीति तथा समाजसेवामा लागेर जनताको काम गर्न सक्दा राज्यबाट पद प्राप्तिको गतिलो स’म्भावना रहेकोछ । फरक शैलि अ’पनाएर गरिने कुनै पनि व्यापार व्यावसायबाट प्रशस्त आम्दानि गर्न सकिनेछ । नयाँ काम पाउने तथा नोकरिमा प’दोन्नतिको प्रसस्त सम्भावना रहेकोछ । चुनौतिहरुको सामना गर्दै लगनशिल भएका काम गर्दा सफलता चुम्न सकिनेछ । अध्ययन अध्यापनमा प्रतिष्पर्धिहरुलाई किनारा लगाउँदै अग्र नतिजा हात पार्न सकिनेछ ।
सं’कट ब्याबस्थापनका लागी चालिएका प्रयासमा बा’धा हुनेछ भने फ’साउनेहरु हा’बि हुनेछन् । हतार हतारमा काम गर्दा बि’ग्रन सक्छ होस पु¥याउनु होला । स’मस्या तथा चुनौतिहरुको सामना गर्नुपर्दा मा’नशिक त’नाब बढ्नेछ । भौतिक सामाग्रीको प्रयोग गर्दा वा सवारि साधन चलाउँदा ध्यान दिनुहोला अ’प्रिय घ’ट्ना घ’ट्न सक्छ । साथिभाईहरुले नै अ’सहयोग गर्नेछन् भने अरुको स्वा’र्थको लागि प्रयोग होईनेछ ।
पारिवारिक तथा ब्याबसायिक यात्राको क्रममा बिभिन्न ठाँउ तथा दृ’ष्यहरुको अबलोकन गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । प्रेम गर्ने जोडिहरुका लामो समय सँगै बसेर भलाकुसारि गर्न सक्नेछन् । महिला मित्रहरुसँग गरिने कुनै पनि व्यापार तथा आर्थिक ब्याबस्थापनका लागि गरिने कारोबारहरु फ’स्टाएर जानेछन् । बिद्या तथा प्र’तिश्पर्धामा अरुलाई पछाडि पारिनेछ भने साथिभाई तथा आफन्तबाट उत्साहजनक सहयोग प्राप्त हुनेछ ।
मामा तथा मावलि पक्षसँग कुनैपनि काम गर्दा सन्तुलित व्याबहार गर्नुहोला दैनिक काम गर्दा म’नमुटावको अवस्था सिर्जना हुँनेछ । तपाईको खुट्टा तान्ने मानिसहरु हा’वि हुँने तथा सत्रुहरु सलबलाउँनेछन् । न्यालयसँग सम्बन्धित काम गर्दा ध्यान दिनुहोला अ’नाबस्यक मु’द्दा मामिला आईलाग्नेछन् । खानपानमा ध्यान नदिए स्वास्थ्य सम्बन्धि स’मस्या आई खर्च बढ्ने योग रहेकोछ ।
अध्ययन तथा अध्यापनमा सफतला मिल्नेछ भने बिचार गरेर बुन्ने योजनाहरु सफल रुपमा सम्पन्न हुनेछन् । व्यापार व्यावसाय फस्टाएर बिशेषगरि स्कुल कलेज तथा शेयर बजार तिर गरिने लगानिमा सुधार भएर जानेछ । माया प्रेममा सा’मिप्यता बढेर जानेछ भने आफन्त तथा आत्मीय मित्रहरुबाट सहयोग पाईने हुदा मन प्रशन्न रहनेछ । भौतिक सम्पति तथा मन परेको सामान प्राप्त हुने हुदा खुसिले उचाई नाघ्नेछ ।
खोज तथा अ’नुशन्धानको क्षेत्र तपाई आफ्नै कारणले फितलो रहने हुँनाले भने जस्तो नतिजा हात पार्न मु’स्किल पर्नेछ । छाति सम्बन्धि स’मस्याले नसताउँला भन्न सकिन्न । परिवार तथा आमासँग छु’ट्टिएर टाडाको यात्रा हुने हुँनाले मन बि’चलित हँुनेछ । कृषि,सहकारि तथा पशुपालन व्यावसायलाई समय सापेक्ष आ’धुनिकिकरण गरि आम्दानिका स्रोत बढाउँन सकिनेछ भने अरु व्यावसायमा नाँफा कमाउन निकैनै संघर्ष गर्नुपर्नेछ ।
Previous सफलताका लागि भगवान श्री कृष्णबाट सिक्नै पर्ने ६ कुराहरु
Next ०७७ साल भदौ २६ गते ईश्वी सन् २०२० सेप्टेम्बर ११ तारिख शुक्रबार हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य